Ogaden News Agency (ONA) – Baxsadka Arkebe Oqubay wuxuu saadaal u yahay in Ururkii TPLF lagu kala cararay
Posted by ONA Admin	/ September 11, 2013
Hadii uu dhab noqdo wararka sheegaya baxsadka ninkan iyo walaalkii oo isagana la leeyahay wuxuu iska dhiibay Mareykanka, waxay muujinaysaa inay Itobiya gashay marxalad bilow ah oo aan la saadaalin karin kobta ay ku dambayn.
Sidaan la socno jabhadda Wayaanaha ee TPLF ee talada dalka Itobiya kala wareegtay kaligii taliyihii hore ee Mingisto xayle Maryam oo ka soo jeeday qawmiyadda Amxaarada, lama aanay wareegin oo kali ah xukunka ee waxay la wareegtay gabi ahanba dalka xag ciidan, siyaasad iyo dhaqaale. Talaabadii ugu horeysay ey qaadeen waxay ahayd inay gabi ahaanba warshadahii dalka uu lahaa u raraan gobolka Tigree, ka dibna ay gabi ahaan ilaha dhaqaale gacanta ku dhigaan. Waxaa inta badan u sahlay inay si dhibyar ula wareegaan shirkadaha iyo ilaha dhaqaale, nidaamkii hanti-wadaaga ahaa ee ka jiray dalka Itobiya markay qabsadeen oo ay dawladdu lahayd gabi ahaanba shirkadaha iyo goobaha wax soo saarka.
Waxay abuureen shirkad lagu soo gaabiyo magaceeda EFFORT (Endowment Fund For The Rehabilitation of Tigrai ) oo loo xilsaaray waxay ugu yeedheen dib u dhiska gobolka Tigree, sanado ka dibna wada qaadatay dhaqaalahii dalka oo noqotay shirkadda ugu weyn uguna dhaqaale badan Afrika. Waxaa gacanta ku hayay shirkadda qoyska Meles gaar ahaan afadiisa oo dhowr bilood ka dib markuu dhintayba lagala wareegay.
Dhibaatada ugu badan ee soo foodsaartay ururka TPLF waxay ahayd boobka hantida dawladda, musuqmaasuqa iyo looltankii loo galay madaxtinimada ururka, Meles Zanawi oo weli nool. Waxaa 2008 doorashada gudoomiyanimada TPLF uu Arkebe Equbay kaga guulaystay Meles Zanawi (Wikileaks), hasa ahaatee isagoo u danaynaya ishaysashada ururka iyo inuusan burbur ku imaanin ayuu uga tanaasulay Meles inuu sii hayo jagada, taasoo ahayd khaladkii ugu weynaa uu ka galay naftiisa iyo xubnihii doortay, sababtoo ah waxaa u cadaatay Meles iyo saaxiibadii inuu ninkan yahay midka jagada ka qaadi doona, sidaa daraadeed 2ba sano ka dib wuxuu ka saaray Golaha Siyaasadda (Politburo) ee TPLF, taasoo ka dhigan inuusan isu soo sharixi karin jagada.
Markuu dhintay Meles dadka la socda siyaasadda TPLF waxay saadaalinayeen in Arkebe Oqubay uu noqon doono RW cusub, hasa ahaatee waxaa aad uga soo horjeedsatay afadii uu ka geeriyooday oo u arkaysay inuu khatar ku yahay qoyska. Markii la’is mari waayay, waxay noqotay in lugu dhex-dhexaadiyo garabyadii looltamayay inuu jagada sii hayo Hailemariam Desalegn intay ku heshiinayaan.
Maxaa is-badaly? Sida muuqata ninkii loo haystay inuu u yahay maxlal, wuxuu la soo baxay (ama loo rakibay) miciyo aanay horey ugu ogayn maqaawiirtii TPLF. Waxaa aad u xoogaystay is-bahaysiga ka dhexeeya 3exda urur ee lawadaaga EPRDF oo ku heshiiyay inay ka saaraan saaxada Wayaanaha. Arintaasi waxay keentay inuu ku kala jabo Wayaanihii oo qaarkood ka quustaan xukun dambe oy soo afjaranatay waqtigii TPLF, sidaa daraaadeed uu la baxsado oqf kasta intuu gacanta ku haystay.